के हो बेलायतको ट्रकमा ३९ जनाको मृत्यु प्रकरण, अहिले सम्मको अनुसन्धान यस्तो छ । – Deep Sanchar
Friday, October 22,2021 / शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८
स्थायी कमिटीमा ओलीको आलोचना : १० बुँदे नमाने पार्टीलाई क्षति
बुहारी चाहन्छन् तर छोरी जन्माउन चाहँदैनन् – धर्मराज युधिष्ठिर
गृहपृष्ठ ∕ ग्लोबल ∕ के हो बेलायतको ट्रकमा ३९ जनाको मृत्यु प्रकरण, अहिले सम्मको अनुसन्धान यस्तो छ ।
के हो बेलायतको ट्रकमा ३९ जनाको मृत्यु प्रकरण, अहिले सम्मको अनुसन्धान यस्तो छ ।
दीप संञ्चार कात्तिक ९, २०७६ गते १९:०८ मा प्रकाशित
एजेन्सी, अक्टोबर २३ को दिन पूर्वी इंग्ल्याण्डको एसेक्समा एक लोरीमा ३९ व्यक्तिको मृत शरीर फेला पर्यो । घटनाका सम्बन्धमा चालकसहित चार व्यक्ति पक्राउ परेका छन्, जसमाथि अहिले हत्याको आरोपमा अनुसन्धान चलाइएको छ ।
एसेक्स प्रहरीले उक्त भयानक ‘घटनासम्बन्धमा सम्पूर्ण परिस्थितिलाई जोडेर हेरिरहेको’ बताएको छ । एसेक्स प्रहरीले यस घटनालाई आफ्नो नगर प्रहरीको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो हत्या अनुसन्धान भनेको छ । धेरै तथ्य आउनै बाँकी रहेहको उक्त घटनाको हालसम्म बाहिर आउन बाँकी तथ्य यस्ता छन्
को हुन् पीडित ?
सुरुमा एसेक्स प्रहरीले जारी गरेको वक्तव्यमा लोरीबाट वरामद भएका ३९ वटै शव सबै चिनियाँ नागरिकको भएको बताएको थियो ।
मृत्यु हुनेमा ८ महिला र ३१ पुरुष मध्ये एक किशोरीबाहेक सबै वयस्क शरीर भएको प्रहरीले बताएको छ । तथापि, पछिका अध्ययनले लोरीमा रहेका केही शव भियतनामी नागरिकको रहेको बुझिएको छ । २६ वर्षीया भियतनामी नागरिक फाम ट्रा माईले मंगलबार राति आफ्ना परिवार सदस्यलाई पठाएको म्यासेजमा लेखिएको थियो ,‘म मर्दैछु । म सास फेर्न सकिरहेको छैन ।’ त्यस यता उनीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन ।
उनको परिवारले मानिस ओसारपसार गर्नेहरुलाई ३० हजार पाण्उड तिरेर ट्रा माई बेलायत हिडेको बताए । परिवारको उनीसँग अन्तिम पटक बेल्जियममा सम्पर्क भएको थियो । लण्डनस्थित भियतनामको दूतावासले वेपत्ता महिलाबारे बुझ्नको लागि आफूहरु एसेक्स प्रहरीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
भियतनामका अन्य दुई परिवारले पनि संचारमाध्यमसँग आफ्ना परिवार सदस्य त्यस लोरीमा हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त अधिराज्यमा भियतनामी समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने एक सस्था भिएटहोमले लोरीमा शव पत्ता लागेको समयदेखि आफूहरुलाई हराइरहेका २० मानिसको फोटो पठाएर खोजिदिन अनुरोध आएको बताएको छ ।
प्रहरीले वाटरग्लेड इण्डस्ट्रीयल पार्क क्षेत्रमा शव रहेको लोरी भेटेको थियो । बुधबार मध्यरातपछि अर्थात १ः४० मा लास रहेको लोरीबारे जानकारी आएको थियो । त्यो स्थान लण्डनको पूर्वबाट १५ किमी टाढा छ । शवलाई पहिले एम्बुलेन्स कर्मचारीले भेटेका थिए । तिनलाई लोरीको सुचना कसले दियो भन्ने हालसम्म केही थाहा भएको छैन ।
विहिबार प्रहरीले शव हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । सबै शवमाथि मृत्युको कारणबारे ‘कारोनार’ जाँच हुनेछ । त्यसपछि प्रहरीले प्रत्येक शवको पहिचान गर्ने प्रयास गर्नेछ । प्रहरीले यसमा धेरै लाग्न सक्ने बताएको छ।
हालसम्म को को पक्राउ परे ?
शुक्रबार स्ट्यास्टेन विमानस्थलबाट एक मानिस पक्राउ परे । उनीलाई अन्जानबस–हत्या र मानिसको ओसार–पसारको आशंका पक्राउ गरिएको हो ।
नर्दन आयरल्याण्डका ती व्यक्ति ४८ वर्षकाका छन् । एसेक्स प्रहरीले शुक्रबार थप दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको बताएको छ । वारिङ्टन निवासी दुवै ३८ वर्ष रहेका ती दम्पत्तीलाई मानव ओसारपसार र ३९ व्यक्तिको अन्जानबस हत्यामा सघाएको आरोप छ ।
त्यस अघि नै बुधाबार लोरीका चालक पनि पक्राउ परेका थिए । २५ वर्षका मो रोविन्सन नर्दन आयरल्याण्ड निवासी हुन् र उनलाई हत्याको आशंकामा पक्राउ गरिएको हो । थप अनुसन्धानको लागि प्रहरीले समय मागेका रोविन्सन प्रहरी हिरासतमा छन् ।
घटनालाई लएर नर्दन आयरल्याण्डका तीन क्षेत्रमा छापा हानिएको छ र नेसनल क्राइम एजेन्सीले घटनामा कुनै ‘सगठित अपराधीक समूह’ संलग्न भए नभएको पत्ता लगाउन काम गरिरहेको छ ।
लोरी र कन्टेनर कहाँको थियो ?
लोरीमा जडान गरिएको जीपीएसबाट प्राप्त तथ्याकंमा रेफ्रिजिरेटर जडित कन्टेनर–ट्रेलर भेटिनुअघि वाहन संयुक्त अधिराज्य र युरोप आउ–जाउ गरेको देखिएको छ । कन्टेनर–ट्रेलर ‘ग्लोबल ट्रेलर रेन्टल’ नामक कम्पनीबाट अक्टोबर १५ मा भाडामा लिइएको देखिएको छ । कम्पनीले आफूबाट भाडा लिएर कन्टेनरलाई त्यसरी प्रयोग गर्न लागेको थाहा नभएको बताएको छ ।
समातिनु केही समयअघि कन्टेनरले पार गरेको मार्ग यस प्रकार छन्ः
१.स्रोतले बताए अनुसार जीपीएस सुचनामा कन्टेनरले अक्टोबर १५मा आयरल्याण्डको मोनाघन छाडेको र नर्थन आयरल्याण्ड पुगेर डब्लीनको दक्षिणतर्फ फर्किएको देखिन्छ ।
२.त्यसपछि डब्लिनबाट वाहन अक्टोबर १६ को मध्यरातमा वेल्सको होलीहेड पुग्यो ।
३.त्यो साँझ, कन्टेनर–ट्रेलर डोभर हुदैं फ्रान्सको काले पुगेर युरोप पूग्यो ।
४.अक्टोबर १७ देखि २२बीच वाहन बेल्जियम र फ्रान्सका विभिन्न सहर पुगेको देखिन्छ ।
५.अक्टोबर २२ मा त्यसले अन्तिमपटक जीब्रुगीदेखि पुरफ्लिट पार ग¥यो ।
एसेक्स प्रहरीका अनुसार ट्राक्टर इकाई(लोरीको अघिल्लो भाग) अक्टोबर २० मा वेल्सको बन्दगाह होलिहेडबाट संयुक्त अधिराज्य प्रवेश गरेको देखाएको छ। लोरी डब्लिनबाट त्यहाँ ल्याइएको थियो । प्रहरीको विश्वासमा ट्राक्टर इकाईले पुरफ्लिटमा कन्टेनर ट्रेलरलाई लिएको देखिन्छ । त्यहाँबाट हिडेको आधा घण्टामा प्रहरीलाई लोरीमा शव भएको खबर पुगेको थियो ।
रेफ्रिजेरेटरयुक्त कन्टेनरको तापक्रम माइनस २५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ । लोरीलाई अहिले एसेक्स प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा राखेको छ ।
सुरुवाती रिपोर्टमा लोरी बुल्गेरिया हुदैं आएकोजस्तो देखिएको थियो । तर बुल्गेरियाको सरकारले ट्राक्टर भाग सन् २०१७ मै उसको देशमा दर्ता भएको भए पनि त्यस यता उक्त देशमा प्रवेश नगरेको बताएको छ ।
बेलायतको ट्रान्जिटमा हालसम्म कति आप्रवासी मरे ?
सन् २०१४ देखि संयुक्त राष्ट्र सघंले ट्रान्जिटमा मर्ने आप्रवासीको तथ्याकं राख्न थालेको हो । त्यस यता, पाँच आप्रवासीको संयुक्त अधिराज्यभित्र शव भेटिएको छ :
–सन् २०१४ मा एक अफगानी आप्रवासीको शव एसेक्सको टिलबुरी डक्समा भेटिएको थियो । शव सिपिङ कन्टेनरमा भेटिएको थियो । बाँकी २४ लाई भने सकुसल उद्दार गरिएको थियो ।
–सन् २०१५ मा दुई आप्रवासीको शरिर ब्रान्स्टनमा एक काठको क्रेटमा पाइएको थियो । क्रेट इटालीबाट पठाइएको थियो ।
–सन् २०१६ मा लोरी मुनि झुण्डीएर आएका आप्रवासी अक्सफोर्डसायरको बनबरीमा झर्दा लरीले किचेको थिए ।
–सन् २०१६ मै फ्रान्सबाट बेलायत पसेको एक लरीमा एक अप्रवासीको शव भेटिएको थियो ।
सन् २०१४ मा युरोपमा आप्रवासी संकट देखिनुअघि यससम्बन्धमा तथ्याकं संकलन नगरिएकाले त्यसअघिका मृत्युका घटना भने संकलन हुन सकेको छैन । तर यस्तो घटना नयाँ होइन ।
एनआरएनए कामचलाउ केन्द्रिय अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्मा गहिरो तनावमा
बोलिभियाको लापाजमा सावरी दुर्घटना हुँदा १२ जनाको मृत्यु
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले उपहारमा पाएको घडी बेचेपछि हंगामा
अर्को हप्तादेखि फेसबुकको नाम परिवर्तन हुने
केन्द्रको हस्तक्षेपले रोकियो एनआरएनए भेला